Ma Wah Ma (Now Shwe Mesquita) – Petunity
Ma Wah Ma (Now Shwe Mesquita)
ဒီတစ်ခါအလှည့်စောင့်နေပြီး မွေးစားသူရှာနေတဲ့ကလေးကတော့ မြောက်ဒဂုံမှာနေပြီး အသက် ၂ လ ကျော်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့အမေကြီးက မြောက်ဒဂုံ ၃၇ ရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ ကိုကိုတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မှာ လာလာပြီးသားပေါက်လေ့ရှိပေမယ့် မွေးပြီးရင်ထွက်သွားပါတယ်တဲ့။ ကလေးတွေကို လာပြန်မကြည့်ဘဲနေတတ်လို့ အဲဒီအိမ်ကကိုကိုတစ်ယောက်ကသာ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရလေ့ရှိပါတယ်။ ခက်တာက အဲဒီကိုကိုကလည်း အမြဲအလုပ်သွားနေရတော့ ကြောင်ပေါက်စနလေးတွေကို အချိန်ပြည့်မစောင့်ရှောက်နိုင်ပါဘူး။ အရင်ပေါက်တဲ့ကလေးတွေတုန်းကလည်း ဆုံးပါးကုန်လို့ ဒီတစ်ခါတော့အသက်ရှင်အောင်လို့ စောင့်ရှောက်ပေးမယ့်သူကိုရှာပေးဖို့ ပက်ယူနတီကို အကူအညီတောင်းလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ "မဝါမ" လေးကို ကူညီချင်တဲ့သူတွေရှိရင် ပက်ယူနတီကို chat box ကနေသာ လက်တို့လိုက်ပါနော်။
ဒီတဈခါအလှညျ့စောငျ့နပွေီး မှေးစားသူရှာနတေဲ့ကလေးကတော့ မွောကျဒဂုံမှာနပွေီး အသကျ ၂ လ ကြျောပဲ ရှိပါသေးတယျ။ သူ့ရဲ့အမကွေီးက မွောကျဒဂုံ ၃၇ ရပျကှကျမှာနတေဲ့ ကိုကိုတဈယောကျရဲ့အိမျမှာ လာလာပွီးသားပေါကျလရှေိ့ပမေယျ့ မှေးပွီးရငျထှကျသှားပါတယျတဲ့။ ကလေးတှကေို လာပွနျမကွညျ့ဘဲနတေတျလို့ အဲဒီအိမျကကိုကိုတဈယောကျကသာ ကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျရလရှေိ့ပါတယျ။ ခကျတာက အဲဒီကိုကိုကလညျး အမွဲအလုပျသှားနရေတော့ ကွောငျပေါကျစနလေးတှကေို အခြိနျပွညျ့မစောငျ့ရှောကျနိုငျပါဘူး။ အရငျပေါကျတဲ့ကလေးတှတေုနျးကလညျး ဆုံးပါးကုနျလို့ ဒီတဈခါတော့အသကျရှငျအောငျလို့ စောငျ့ရှောကျပေးမယျ့သူကိုရှာပေးဖို့ ပကျယူနတီကို အကူအညီတောငျးလာပါတယျ။ နောကျဆုံးကနျြတဲ့ "မဝါမ" လေးကို ကူညီခငျြတဲ့သူတှရှေိရငျ ပကျယူနတီကို chat box ကနသော လကျတို့လိုကျပါနျော။
This time foratiny kitten from North Dagon. She's now withakind-hearted brother who has to go out for work everyday and couldn't care her enough. The mother cat hasahabit of leaving the kittens after birth and she rarely comes back. So this last kitten is in immediate need for an adopter and she would be happy to land inawelcoming home. She's now two months old. If you think you're up for adopting this kitten, "Ma Wah Ma", just PM us!
I can not buy kitten but i am poor
Hi can not buyakitten but i am poor